Qaybaha astaanta | Hal-abuurka khadka tooska ah
Astaantu waa mid ka mid ah shaqooyinka, naqshadeeye garaaf ahaan, wax badan lagu weydiin karo. Sida ganacsiyada internetka ay u bataan, calaamaddu waxay noqotaa qayb aasaasi ah oo lagu aqoonsanayo astaanta. Oo yaa yidhi calaamaddu waxay tidhi dukaanka internetka, shirkad, ganacsi, iskii u shaqeysta… Laakin, waa maxay qaybaha astaanta?
Maanta waxaan rabnaa inaan kaala hadalno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato logos, laga bilaabo waxa ay yihiin ilaa noocyada, qaybaha iyo qaybaha kale ee aasaasiga ah ee ay tahay inaad ku barato iyaga.
1 waa maxay logo
2 noocyada logos
2.2 Muuqaal ahaan
2.4 Baseline ama Strapline
3 Qaybaha astaanta
4 Talooyin loogu talagalay abuurista
waa maxay logo
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan kuu sheegno waa taas Waxaad isticmaashay ereyga Logo qalad noloshaada oo dhan. Kuwa baranaya naqshadeynta garaafyada waxay og yihiin in marka qof uu weydiiyo summada, waxa ay runtii weydiinayaan waa aqoonsiga astaanta, ama sawirka astaanta. Taasi waa, wax u taagan waxay qabtaan ama iibiyaan oo muuqaal ahaan soo jiidanaya dareenka. Laakin ma aha calaamad.
Oo waa in calaamaddu tahay a calaamad garaaf ah oo la xiriiri doonta summada, badeecada, bakhaar, ganacsi, shirkad, mashruuc, iwm. Laakiin sida oo kale waa calaamad garaaf, gaar ahaan kelmad leh far. Waa kaas.
Taasi runtii waa calaamadda. Tusaale ahaan, Coca Cola waa calaamad. Zara waa calaamad. Disney, Kellogg's, Google waa tusaaleyaal badan. Laakiin haddii aad u fiirsato dhamaantood, waxa kaliya ee ay wadaagaan waa in ay matalaan calaamadda iyada oo loo marayo qoraal. Kaliya taas.
Anagoo ka duulayna dhamaan inta kor ku xusan, waxaan uga tagnay "logos" badan oo jidka ah. Oo ma aha sababtoo ah ma ay yihiin, laakiin maxaa yeelay, waxay ka duwan yihiin kuwa uu ereygaas dhigayo. Tusaale ahaan, qiyaas astaanta Burger King. Tani waxay xambaarsan tahay sawir, iyo gudaha ereyada astaanta. Ma calaamad baa? Maya. Waxa la mid ah Apple, Starbucks…
Dhammaantood waxay ka tirsan yihiin noocyada kale ee calaamadaha. Gaar ah:
Waa a calaamad ama muuqaal u oggolaanaya in la aqoonsado aqoonsiga summada, ganacsiga, shirkadda, dukaanka... kaliya sawirkaas, iyada oo aan loo baahnayn qoraal la socda.
Tusaalooyinka tan? Hagaag, tufaaxa Apple, M ee McDonald's, Nike… Runtii way badan yihiin.
Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa a aqoonsiga oo isku dara waxa uu noqon lahaa astaanta oo leh sawir ama calaamad la xidhiidha.
Hadda, mid kasta oo ka mid ah qaybaha calaamaduhu way ka duwan yihiin midba midka kale. Taasi waa, waad tirtiri kartaa qoraalka ama ka saari kartaa sawirka wali way macno samayn doontaa. Waxay si fiican u wada shaqayn doonaan ama si gooni gooni ah.
Tusaalooyinka iyaga ka mid ah waxay noqon karaan Carrefour (halka ay ku leeyihiin sawirka iyo qoraalka), Converse, Chanel, Spotify, LG, Adidas ...
Xaaladdan oo kale, shirkaduhu waxay si fudud ugu ciyaari karaan sawirkooda ama calaamadahooda iyo si ay u siiyaan fursado badan si ay ugu isticmaalaan xayaysiinta.
Marka la soo koobo, waxaan kuu sheegi karnaa in cilmi-nafsi yaqaanku uu dhab ahaantii yahay a isku darka astaanta iyo kelmado kooxaysan. Laakiin waxay kaga duwan yihiin kii hore in aan la kala qaybin karin setkan sababtoo ah waxay luminaysaa sababteeda.
Aan tusaale soo qaadano, bal qiyaas astaanta Starbucks. Haddii aan ka saarno qoraalka, sawirka kaliya kuma filna in la aqoonsado shirkadda. Aad u adag. Pizza Hut, haddii aan ka saarno magaca, waxa kaliya oo looga tagi doonaa nooc ka mid ah koofiyada, laakiin wax kale maaha.
Xaaladda Harley-Davidson waxay noqon doontaa isku mid. Ka saarida magaca waxaa nalooga tagay gaashaan si ay u ekeysiiyaan calaamadda gaashaanka la mamnuucay.
Baseline ama Strapline
Runtii ma noqon doonto nooc calaamad lafteeda ah, laakiin waa a qalab ay ku jiraan. Laakiin weli waxa loo aqoonsan karaa nooca.
Tan waxaan ula jeednaa ereyo ama weedho la socda calaamadda hoose. Tani waa isku dayga lagu qeexayo shaqada ganacsiga, hab lagu muujinayo wax laga yaabo in aan la caddayn calaamadda.
Tusaalooyinka noocaan ah? Waxay noqon kartaa Baseline (Adeegyada Hal-abuurka), SynergyHealth (Shaqadayadu waxay ilaalinaysaa adduunkaaga), Nokia (isku xidhka dadka), Eurovision (Tartanka Heesaha).
Markaan aragnay dhammaan kuwan kor ku xusan, waxaan dhihi karnaa qaybaha astaanta waa inay sameeyaan noocyada jira.
Waana taas, haddii ay ahaan lahayd magac uun, tusaale ahaan, waxay ahaan lahayd calaamad. Elisabet Vidal, Encarni Arcoya, Hal-abuurka, Yoigo. Dhammaan kuwan waa calaamado.
Hadda qiyaas inaad leedahay a icon ama sawir. Qaybaha summada ayaa noqon doona:
Astaanta ama sawirka (isotype).
Tusaale? Waxay noqon kartaa M ee McDonald's, ama tufaaxa Apple, astaanta Instagram, iwm. Haa, tan waxaa loo qaadan karaa imagotype ama xitaa isologist.
Aan u gudubno halkaas. Hadda qiyaas a Logo leh sawir, magac iyo odhaah hoose.
Qaybaha aad ka heli lahayd halkan waxay noqon lahaayeen:
Icon ama image (isotype ama imagotype).
Kelmadda hoose (saldhig ama xadhig).
Tusaalooyinka noocaan ah? Hagaag, Pink Pomelo, Spartan ama Elisabet Vidal.
Dhab ahaantii, qaybaha calaamaduhu waa noocyada jira, sababtoo ah calaamadda lafteeda, haddii aan ku salayno fikradeeda dhabta ah, waxay ahaan lahayd oo kaliya magaca badeecada ama calaamadda mana jiraan qaybo ka badan ereyga laftiisa. taas oo qeexaysa astaanta astaanta.
Talooyin loogu talagalay abuurista
Nooc kasta oo ah aqoonsiga shirkadda aad rabto inaad isticmaasho, hadday tahay calaamad, isotype, imagotype..., waa inaad haysataa samir si aad u hesho waxyi. Mararka qaarkood fiirinta tusaalooyinka ayaa kaa caawin kara inaad ogaato, iyadoo ku xiran qaybta ganacsiga laga abuurayo, midabada ama naqshadaha tartanka. Macnaheedu maaha in aad koobiyayso iyaga, laakiin waxay la macno tahay ogaanshaha waxa ugu badan ee loo aqoonsaday ganacsiyadan.
Intaa waxaa dheer, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa:
Asal ahaan. Taasi waa, abuur wax cusub oo ka caawinaya in ay ka soocaan kuwa kale oo dhan. Waa run in ay ku lug leedahay wax badan oo hal-abuurnimo ah, laakiin soo celinta waxay jebin kartaa xuduudaha waxayna ka dhigi kartaa sawirka calaamaduhu inuu sii dheeraado.
U fiirso isticmaalayaasha Waa arrin si sii kordheysa u calaamadeysa shirkadaha, qofka wax iibsada iyo khibradda adeegsadaha waa laba qodob oo aad muhiim u ah, haddii aad ku guuleysato inaad ku mideyso naqshadaada, waxay gaari doontaa saameyn aad u guuleysata.
Midabka iyo qoraalka. Midabka sawirada, qoraalka, nooca font ee ku jira ... Midabada laftoodu waxay matalaan qaybaha, laakiin sidoo kale dawladaha iyo dareenka. Si wadajir ah oo leh qoraal ku habboon, waxaad ka heli kartaa calaamadda saxda ah.
U fiirso. Tan waxaa lagu gaaraa dhammaan kuwa kor ku xusan, laakiin ka sarreeya dhammaan adiga oo isticmaalaya naqshado si sahlan loo xasuusto oo fudud, sababtoo ah habkaas waxaad heli doontaa fursado badan oo badan oo lagu aqoonsan karo.
Shakiga ku saabsan qaybaha astaanta? Na weydii!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Qaybaha astaanta
Taariikhda astaanta Burger King